Nepal Samaya | आस्थाको 'उज्यालोको खोजी'
आस्थाको 'उज्यालोको खोजी'
शनिवार २३ गते राजधानीमा एक कार्यक्रम बिच ‘उज्यालोको खोजी’ नामक गजल संग्रह बिमोचन भएको छ । साथै उक्त कार्यक्रममा प्रदीप थापाको ‘रुवाई’ गीत गजल संग्रह ‘प्रयास’ र गीति एल्बम ‘प्रयास’को पनि संयुक्त सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाल समय | काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४
आइतबार, पुष १६, २०७४, काठमाडौं
काठमाडौं- शनिवार २३ गते राजधानीमा एक कार्यक्रम बिच ‘उज्यालोको खोजी’ नामक गजल संग्रह बिमोचन भएको छ ।
साथै उक्त कार्यक्रममा प्रदीप थापाको ‘रुवाई’ गीत गजल संग्रह ‘प्रयास’ र गीति एल्बम ‘प्रयास’को पनि संयुक्त सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘उज्यालोको खोजी’माथि बोल्दै प्रमुख अतिथि ललिजन रावलले समाज परिवर्तनको अहम् भूमिका खेल्ने बताए । गजलको रचना र संरचना प्रक्रियालाई समय क्रमसँगै स्रष्ठाहरू आफू अनुकुल व्याख्या गर्न लागेको बताए । साथै समाजमा भएका तमाम विकृति र बेतिथिविरुद्ध लेख्नु पर्ने बताए ।
रुवाई गीत र गजल संग्रहका लेखक प्रदिप थापाले कलिलो विधाको रुपमा ‘रुवाई’ रहेको बताए । माया प्रेममाथि बढी कलम चलेको बताए ।
पुस्तक तथा एल्बममाथि गजलकार तथा समालोक प्रभाती किरण, ज्ञानु विद्रोही, शैलेन्द्र अधिकारी, डा. भोजराज अधिकारी र नरेन्द्रजंग पीटरले बोलेका थिए ।
जनय्द्धको समयमा वर्गिय मुक्ति चेतनाको बिकास भएको बताइन् कवि तथा सञ्चारकर्मी आस्था केसीले ‘उज्यालोको खोजी’ गजल संग्रहलाई कन्दरा पब्लिकेशनले छापेको हो । कार्यक्रमका अध्यक्षता अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गजल मञ्चका नेपाल च्याप्टर संयोजक भरत पौडेलले गरेका थिए ।
प्रकाशित: December 31, 2017 | 18:23:00 काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४
काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४
ढाका फिल्म फेस्टिभलमा दुई नेपाली फिल्मलाई निर्देशक र स्क्रिप्टको अवार्ड
फेस्टिभलको ‘वेस्ट मिट्स इस्ट स्क्रिनप्ले ल्याब’अन्तर्गत किरण पोखरलेको ‘पुतलीको सपना’ले उत्कृष्ट स्क्रिप्टको अवार्ड जित्दा सुजित बिडारीको ‘ऐना झ्यालको पुतली’ले एसियन सिनेमा विधातर्फ उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड पाएको हो।
कोरोना प्रभाव : दुई युनिटमा बाँडिएर छायांकन हुँदै सौगात मल्लको ‘लाखे’
ठूला बजेटमा निर्माण हुने भनिएका फिल्महरु ‘एक्स ९’ र ‘सत्यम्’ अझै फ्लोरमा जान नसकिरहेका बेला ‘लाखे’ले भने दुई युनिटमा बाँडिएर भएपनि छायांकनलाई निरन्तरता दिएको हो। यो फिल्मको अहिले उपत्यकामा छायांकन भइरहेको छ।
भोजपुरी स्टार निरहुआसँग फिल्म गर्दै शिल्पा पोखरेल
विराज भट्ट भोजपुरी सिनेमामा आफूलाई स्थापित गर्न सफल नेपाली कलाकार हुन्। पछिल्लो समय यही दौडमा छिन् अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल।
दासप्रथा उन्मूलनमा हस्ताक्षर गर्दा काँपेको लिंकनको हात
चालिस लाख मजदुरहरूलाई मालिक र सामन्तहरूको माखेसाङ्लोबाट मुक्त गर्न सकिएमा श्रमिकहरू ठूलो फौज तयार हुने कुरामा ती दुवै राष्ट्रका पुँजीपतिहरू विश्वस्त हुन थालेका थिए।
कापुचे कलायात्रा : कुचि चोप्‍न नभ्याउँदै आइस बन्थ्यो पानी
प्रकृतिको अनुपम उपहारमध्येको एक कास्कीको ‘कापुचे लेक’लाई क्यान्भासमा कैद गर्न पुगेका भक्तपुरका दुई कलाकार क्यान्भासमा नौला सिर्जनाका साथै अनुपम अनूभूति बोकेर राजधानी फर्किएका छन्।
गायिका समीक्षा भन्छिन्- समय आउँदैछ, यथार्थ खुलाउनेछु
बिहीबार फेसबुकमा पुरानो स्टाटसलाई कोट गर्दै उनले लेखेकी छन्, 'अब समय आउँदैछ, यथार्थ खुलाउनेछु।'
सभापतिमा देउवाको एक महिना, देखिएन सुध्रिने संकेत
‘पार्टीमा पुस्तान्तरणको एजेन्डा सेट भएको छ। रुपान्तरणको सन्देश महाधिवेशनले दिएको छ। पदाधिकारीमा युवाहरुको प्रवेश भइसकेको छ। अब सभापतिजी विधि र पद्धती अनुसार नै चल्नुहुन्छ भन्‍ने लागेको थियो। तर, उहाँको कार्यशैलीमा सुधारको छाँट देखिएन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रश्न उठाउँदा झपार्नुहुन्छ। बोल्न दिनुहुन्‍न, अनि कसरी सुधारको अपेक्षा राख्‍ने?’
काठमाडौंका गेस्ट हाउस : महिलाका लागि असुरक्षित बन्न थालेका हुन्?
'घटना बढ्दै गएपछि हामीले गेस्ट हाउसमाथि निगरानी बढाएका छौं। गेस्ट हाउस छिर्दा र बाहिरिने ठाउँमा सीसी क्यामेरा अनिवार्य रुपमा लगाउन निर्देशन दिएका छौं।'
काठमाडौंको सुन्धाराबाट 'दंगाली छोटे डन' पक्राउ, यस्ता छन् कसुरका शृंखला
'दङ्गाली छोटे डन' उपनामले परिचित विकास पुन काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई काठमाडौंको सुन्धारास्थित होटल भ्यू ग्लोबलमा लुकीछिपी बस्दै आएको अवस्थामा सोमबार पक्राउ गरेको हो।
इतिहासमा आज : अमेरिकी राज्यमा राजतन्त्रको अन्त्य, जापानमा शक्तिशाली भूकम्प
आज सन् २०२२ जनवरी १७। विश्‍वभर आजका दिनमा भएका महत्वपूर्ण घटनाहरुलाई यहाँ समेटेका छौं।
चुच्चे नक्सामा बढ्यो भारतको हैकम, कूटनीतिक पहलमा यसरी पन्छियो सरकार
'सरकारको प्रवक्ताले बोल्ने त एउटा कुरा भयो, अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्थ्यो। अर्को कुरा भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकालेपछि दिल्लीस्थित नेपालको दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्थ्यो।'